10 taona nampihomehezana : hitondra ny “Dontom-posa” ry Etsetra | NewsMada
10 taona nampihomehezana : hitondra ny “Dontom-posa” ry Etsetra
Riri sy Aldini indraindray. Zisy sy Lenina koa matetika… Ry Etsetra Etsetra foana ireo. Tamin’ny 10 taona lasa, tsinjotsinjon’ireo zoky ary hita taratra fa handimby ireo mpanao hatsikana izay mbola vitsy izy mianaka ireto. Izy ireo rahateo no nivoaka ho mpandresy tamin’ilay fifaninanana “Kidaona mihomehy”…
10 taona aty aoriana, hisedra sehatra goavana amin’izay ry Etsetra Etsetra. Hitondra ny “Dontom-posa” etsy amin’ny CCEsca Antanimena ry Riri sy Aldini ny alahady 26 marsa izao, manomboka amin’ny 3 ora tolakandro. Lohahevitra mifandray amin’ny zava-misy andavanandro, arahina sira araka ny mahazatra an-dry zalahy izany.
Tsy hohadinoina fa hampiakarina an-tsehatra ihany koa ny “Vazovazy” mandritra ny seho. Manana maromaro izay efa nahazoany alalana tamin’ireo mpamorona ihany koa izy ireo. Hira novaina tonony mba hampihomehy ireo, ary havoakan’ny Etsetra Etsetra anaty rakikira manokana. Ho hita anatin’io rakikira izay tsangambaton’ny faha-10 taon’ny tarika io koa ny ampahany amin’ireo hatsikan’i Zisy sy Lenina.
Araka ny fampitam-baovao avy amin-dry Etsetra Etsetra ihany, misy amin’ireo hatsikana entin’izy ireo an-tsehatra no notsoingaina manokana tamin’ireo efa nentiny tanatin’ny fandaharana tamin’ny fahitalavitra. Maro koa anefa ireo vaovao be, satria tsy mitsahatra mamorona ihany koa izy roa lahy ireto isan’andro.